Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » Impilo yeHlabathi: Ihlabathi elitsha emva kwe-COVID
Ngaphezu konyaka ukusukela oko ubhubhani we-COVID-19 waqala, umhlaba uthatha izifundo ezifundiweyo ukunceda ukuchacha kwehlabathi kunye nokuthintela iimpazamo ezifanayo ukuba zingaphinde zenziwe kwiimeko ezingxamisekileyo zezempilo ezizayo.
Impilo: UKhetho lwezoPolitiko-iSayensi, iSolidarity, iziSombululo, zamva nje kuthotho lwezihloko eziveliswe ngentsebenziswano noMbutho wezeMpilo weHlabathi, iqwalasela eyona ndlela yokukhusela uluntu lwehlabathi kwiintsilelo ezibonwe ngexesha lo bhubhani kwaye ifuna izisombululo ezisekelwe kwisayensi. sebenzela wonke umntu. Upapasho lokuqala kolu ngcelele lwafuna ukhuseleko lwezempilo jikelele, ngelixa elesibini libize iinkokeli zehlabathi ukuba zimanyane ekuphenduleni kwazo kwi-COVID-19.
Njengakuhlelo lwangaphambili, upapasho lunamanqaku aphambili aphuma kuluhlu oludumileyo lwababhali. Baquka uTedros Adhanom Ghebreyesus, umalathisi-jikelele we-WHO, uAmina J Mohammed, usekela-sosiba-jikelele weZizwe eziManyeneyo, kunye noLungile oHloniphekileyo uGordon Brown, unozakuzaku we-WHO kwinkxaso-mali yezempilo yehlabathi nowayesakuba yinkulumbuso yaseUnited Kingdom.
Icandelo elithi 'Solidarity' liphonononga utyalo-mali kukhuseleko lwezempilo lwexesha elizayo kunye neendlela ezintsha ezinokuvula indlela eya kwiMpilo Kubantu Bonke. Kwicandelo 'leNzululwazi', ababhali ababandakanya uCarlos Alvarado Quesada, umongameli weRiphabhlikhi yaseCosta Rica, qwalasela indlela ihlabathi elinokuthi liqhubele phambili ngayo ngezifundo ezidlulileyo kunye nokuba kutheni unyango lwezempilo kufuneka ludlule imida. Icandelo 'leZisombululo' lijonga ukuba singayiqhubela njani na impilo ngokukhathalela indalo kwaye kutheni kufuneka sithathele ingqalelo isoyikiso sokunganyangeki kweentsholongwane.
Impilo: Ukhetho lwezoPolitiko - iSayensi, iSolidarity, iSombululo yimpapasho esemthethweni yeProjekthi yoLawulo lweHlabathi eveliswe ngokubambisana noMbutho wezeMpilo weHlabathi. I-Global Governance Project linyathelo elidibeneyo phakathi kwe-GT Media Group, inkampani yokushicilela yaseLondon, iNkqubo yoLawulo lwehlabathi esekelwe kwiYunivesithi yaseToronto, kunye neZiko lezeMpilo leHlabathi kwi-Graduate Institute of International and Development Studies e-Geneva.